Can I make self-studying C# without other programming knowledge? — MYSTERY ZILLION
Can I make self-studying C# without other programming knowledge?
September 2011 edited September 2011 in C#
ကျွန်တော့်မှာ Programming နဲ့ပတ်သတ်ပြီးဘာ Knowledge မှမရှိပါ။
အခုမှစလုံးရေစမှာပါ။ ကိုယ်ဘာသာကိုယ်သိပ် Heavy မဟုတ်တဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသုံး Program လေးတွေရေးချင်လို့ပါ။ အလုပ်ရရေးအတွက်မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ဘာသာလေ့လာပြီးသုံးချင်လို့ပါ။ Web အတွက်မဟုတ်ပဲ Desktop အတွက်အဓိကသုံးမှာပါ။ အဲ့ဒါအင်တာနက်မှာရှာဖတ်ကြည့်တော့ C# နဲ့ Python ထဲကတစ်ခုခုကိုသုံးချင်ပါတယ်။ C# ကိုတစ်ခြား C တို့ C++ တို့လို Programming Language တွေမတတ်ပဲအခြေခံကနေစလေ့လာရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါသလား? အခြားအလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်သင်တန်းတက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ Self-Study ပဲလုပ်မှာပါ။ Self-Study လေ့လာနေကျဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒါ Free ရတဲ့ Microsoft Visual C# 2010 Express Edition ကို Download ဆွဲရင်ရပြီလား။ ဘာတွေထပ်လိုမလဲမသိဘူး။ အခြေခံကစမယ်ဆိုရင်ဘယ် Ebook တွေဖတ်သင့်သလဲညွှန်းပေးပါဦး။
အဲ့မှာ ရေးထားတာလေးတွေ့မိပါတယ်။ အဲ့ဒါလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါလား။ ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုပဲဖတ်နေတာပါ။Programming Knowledge မရှိလဲရမယ်လို့တော့ ထင်တာပဲ။
ကျွန်တော်ကတော့ အခြေခံရှိတော့ ebook တွေနဲ့လည်း အဆင်ပြေနေတယ်ဗျ။
ebooks ​တွေတော့ ကျွန်တော့ဆီမှာရှိတယ်။ အပြင်မှာ ယူလို့အဆင်ပြေမလားမသိဘူး။ online ကနေ share ဖို့က ကျွန်တော်လဲမအားဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။
ပြီးတော့ သိပ် Heavy မဟုတ်တဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသုံး Program ​လေးတွေကို တစ်ချို့ developer ​တွေက free ပေးတာတွေလဲရှိပါတယ်။